14-01-2013 Wasiirrada Arrimaha Dibadda Iyo Madaxtooyadda Somaliland Oo Caawa Ka Dagay Dalka Imaaraadka Carabta.
Wasiirrada Arrimaha dibadda iyo Madaxtooyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa caawa fiidkii ka degay magaaladda Dubia ee dalka Imaaraadka carabta, halkaasi oo ay socdaal shaqo ugu kicitimeen.
Wasiirradan oo galabta ka dhoofay dalka Jabuuti ka dib markii ay soo dhamaysteen socdaalkii la xidhiidhay aaskii iyo tacsidii ALLE ha u naxariistee Guddoomiyihii Baanka dhexe ee Jabuuti Marxuum-Jaamac Maxamuud Xayd, oo ay ka mid ahaayeen wefti miisaan culus oo ka koobnaa Wasiirro iyo Marwadda koowaad ee Somaliland oo wakiil ka ahaa Madaxweynaha Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, oo u waramayay shabakadda wararka ee Somaliland.Org, ayaa sheegay in caawa fiidkii ka dageen madaarka magaaladda Abu-dubia ee dalka Imaaraadka carabta, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil sar-sare oo ka tirsan dawladda Isku taga Imaaraadka carabta.
“Waxaanu socdaalkayagu la xidhiidhaa inaanu sii xoojino oo ka wada hadalo dawladda Imaaraadka carabta qodobo aanu hore uga wada hadalay oo ay ka mid ahaayeen casriyaynta dekadda Berbera iyo mashaariic kale oo ay dalka ka fulin doonto Imaaraadka carabtu,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu.
Wasiirku wuxuu intaasi ku ladhay “Waxa kale oo aanu ka wada hadli doonaa sidii kor loogu sii qaadi lahaa iskaashiga iyo cilaaqaadka labada dal ee walaalaha ah.”
Wasiirku waxa uu tilmaamay in mudada ay socdaalka ku joogaan dalka Imaaraadka ay kulamo la yeelan doonaan masuuliyiin ka tirsan wasaaradda Arrimaha dibadda iyo Haay’adaha samo-falka dalkaasi.
Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, waxa uu uga mahad celiyay dawladda imaaraadka carabta sidii ay ugu soo dhaweeyeen dalkaasi.
Labadan Wasiir waxa lagu wadaa inay mudada ay joogaan Imaaraadka carabta ay kulamo la yeeshaan qurbo-jooga Somaliland ee ku dhaqan wadankaasi.
Sida la ogyahay dalka Imaaraadka carabtu waxa uu Somaliland ka taageeray 25-kii bilood ee la soo dhaafay ceelal biyood oo laga hirgeliyay gobolada dalka, ka dib markii Madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo wefti uu Hoggaaminayay ay booqasho ku tageen wadankaa daba-yaaqadii 2011-kii.